Indlu encinci yegadi 23m2, embindini - I-Airbnb
Indlu encinci yegadi 23m2, embindini
Indlu yethu encinci yegadi inegumbi lokulala eliyi-23m2, igumbi lokuhlala, ikhitshi kunye neshawari yangasese. Ayinkulu kodwa icocekile kwaye ithambile. Kwigumbi lokulala kukho ibhedi eyi-120 cm ububanzi (1-2 pers) kunye negumbi lokuhlala i-90 cm ibhedi / i-sofa (1 pers).
I-COVID19 ACTS: ikhalenda ivaliwe iintsuku ezi-3 phakathi kweendwendwe. Uninzi lweendawo ezifana nezibambo, iiswitshi, izitulo kunye neefriji zibulawa zintsholongwane. Ndigcina umgama womzimba kwiindwendwe, nto leyo ayindithinteli ukuba ndonwabe ukunceda ngezinto ezifunekayo.
Indawo isembindini wesitrato esihle sokuhlala - iKarlavägen, malunga ne-7-8 yemizuzu yokuhamba ukusuka kwiSibhedlele seYunivesithi yaseSkåne kunye ne-12-15 min ukusuka eLund C. IKarlavägen ineegadi ezishinyeneyo kwicala elingasentshona kwaye ngaphaya kwazo kuqhutywa isiporo. Thina ngokwethu asikhe siphawule isandi esiphuma koololiwe, kodwa abantu abangevayo isandi banokuphazanyiswa.
Ndiyavuya ukukunceda ngeengcebiso kunye neengcebiso zokuhlala kwakho kwisixeko sethu esihle kunye neendawo ezisingqongileyo. Ukongeza kwisiSwedish, sikwathetha isiGrike, isiNgesi nesiJamani. Ndiyasiqonda neSpanish esincinci nesiFrentshi.
Iilwimi: English, Deutsch, Ελληνικά, Svenska
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Lund